AMAGUMBI OKUHLAMBELA APHEZULU (IMIFANEKISO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Amagumbi okuhlambela aphezulu (Imifanekiso)
Amagumbi okuhlambela aphezulu (Imifanekiso)
Wamkelekile kwigalari yethu yezindlu zangasese ezinobunewunewu. Le mifanekiso ibonisa izindlu zangasese ezibalaseleyo kunye nokuhonjiswa okuphezulu, kunye neempahla ezintle. Ukusuka kwimvula enkulu yemvula, ukuya kwiibhafu ezinkulu ze-whirlpool, kunye noyilo olumangalisayo loyilo, uya kufumana amanqaku amahle kuzo zonke ezi zithuba. Jonga la magumbi okuhlambela aphezulu kwaye ufumane izimvo kunye nenkuthazo yokudala indawo yakho yokuhlambela efanelekileyo.
Kumfanekiso ongasentla kwesibini seentsika zaseKorinte ezinesiseko segolide kunye neentsika zokubamba zibambe isilingi esipeyintwe ngobunono ngaphezulu kwesetyhula iJacuzzi embindini wale ndlu yokuhlambela. Ngapha nangapha, iibhentshi zegolide nezesikhumba zihlala phambi kwesitopu sokungabinanto esinexabiso kunye nezibane zodonga lwekhandlela. Iindonga zikwipeyinti emhlophe eyenziwe ngombala, ehambelana kakuhle nayo yonke itrayi yegolide kunye neethayile zemibala yobhedu macala onke.
Iingcamango zeBlue Bathroom Ideas
Igumbi lokuhlambela elinobunkunkqele alithethi nje indawo enkulu kunye neendonga kunye neetreyim ezineenkcukacha, oko kukwathetha umsebenzi ongaphezulu. Uninzi lwabantu luza kuchitha imizuzu engama-20 ubuncinci kwigumbi lokuhlambela yonke imihla, luyenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zibaluleke kakhulu endlwini, kwaye bayiphakamise ukusuka kwindawo yezempilo ukuya kwindawo yokubonisa nokuzonwabisa. Nangona ufuna ukujonga okubandakanya ii-chandeliers, iitrimu ezinzima kunye neenkuni ezinqabileyo kunye namatye kulungile, Nazi ezinye izinto ezintsha zokuhlambela zokwenza igumbi lakho lokuhlambela likukhonze ngakumbi.
Ishawa yemvula -Ukuba akukho sithuba sebhafu, eyona nto intle onokuyifumana kwindawo yakho yeshawari yishawa yemvula. Ngokwesiqhelo efakwe eluphahleni kanye embindini wendawo yokuhlambela, isilingi semvula silingisa ishawa yenene emvuleni, amathontsi agudileyo, anzima avela phezulu. Igolide, ubhedu olunamafutha okanye iinwele ezigqityiweyo ze-chrome zigqibile ukukhetha okuhle kwimvula emanzi kunye neetephu.
Ibhafu - Enye yezona zinto zisisiseko kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela ibhafu. Nangona ukuba neshawa entle enendawo yokuhlambela enemvula kuyintsikelelo kukodwa, ukuba nendawo yokuphumla kwaye uthathe ibhafu ende efudumeleyo kubalulekile ekuphumezeni igumbi lakho lokuhlambela lephupha. Iibhubhu zingenziwa ngokwezifiso, kunye ne-resin ibe yinto elula yokugcina inketho enokufika ekugqibeleni kwe-matte. Ukongeza, iibhafu zinokupheliswa, ngamanyathelo akhokelela ebhafini, ukuze iqonga elijikelezileyo libe nokuhonjiswa ngezityalo ezinamanzi, amakhandlela, njl.
Indawo yomlilo -Ugqibelele kumagumbi okuhlambela amakhulu aneebhafu, indawo yokubasa umlilo yindlela entle yokufudumeza igumbi lokuhlambela, ngakumbi xa abasebenzisi benqwenela ukuhlala ebhafini ngeenyanga zobusika. Ukongeza, ukongeza isambatho sokuhombisa okanye ibhentshi esezantsi kwindawo yokuphumla yomlilo kunika ukhetho ngakumbi lwezinto zokuhombisa.
Umgangatho ofudumeleyo - Kwigumbi lokuhlambela elingenasithuba saneleyo, imigangatho eshushu-isithuba yindlela elungileyo yokugcina ubushushu ngexesha lobusika. Iinkuni ezinyangiweyo, ngakumbi i-Cedar (ikwasetyenziswa kwii-sauna) yenye yezona ndlela zintle zomgangatho ofudumeleyo njengoko ihambisa ubushushu kakuhle ngelixa ihlala ifudumele ngokukhuselekileyo, ukuze abasebenzisi bakwazi ukuhamba ngokukhuselekileyo kwindawo yangasese. Ukongeza, ingxelo ephathwayo yokhuni lomsedare ifunxa amanzi, iqinisekisa ukuba amadama awenziwa, ngaphandle kokujijisana nokuzikhulisa.
Ukufakwa ngaphakathi kwesiko -Amagumbi okuhlambela e-luxe amaninzi anendawo yokuhamba egumbini lokuhlala, eluncedo kakhulu njengoko zonke iimpahla zakho zinokuba kwindawo enye. Uninzi lukwagxininisa ukubaluleka kweedrowa kunye neekhabhathi eziphantsi kwekhawuntara yokuhlambela, zisenza indawo eyaneleyo yeemveliso ezicocekileyo, izinto zokuthambisa, iilinen kunye nezinye iimfuno zangasese. Kukwabaluleke kakhulu ukuba izinto ezisetyenziselwa ezi zinto zakhiweyo (zihlala ziyindibaniselwano yomzimba wokhuni kunye netafile yamatye) zihambelana kakuhle nokuziva ngokubanzi kunye nombala wombala wegumbi lokuhlambela.
Ifenitshala yegumbi lokuhlambela Amagumbi okuhlambela izindlu angaphezulu kweempompo kunye nezindlu zangasese, ngakumbi xa unendawo enkulu yokufikelela. Ezinye izinto ezibalulekileyo zefanitshala yokuhlambela zibandakanya iiragi, iiraki, iishelufa, izitulo kunye nezihlalo eziphakanyisiweyo. Ukubandakanya ezi ntlobo zeempawu zahlula izindlu zokuhlambela eziqhelekileyo kwizindlu zangasese ezintle, kwaye zinokwenza amava akho okuhlambela abe lula ngakumbi. Into oyithandayo kwiindawo ezininzi zokuhlambela ze-luxe yi-Ottoman, kuba inika indawo ukubonakala kweklasikhi, ngelixa kulula ukuhamba nokugcina indawo.
Igumbi lokunxiba elikhulu lamaVictoriya kwi-Ottoman ejikelezayo enesitshixo esimnyama sesinyithi esijinga phezu kwayo. Kwelinye icala, izipili ezinkulu zixhonywe eludongeni ngemifanekiso emhlophe eqingqiweyo phantsi kwayo iphethe itheyibhile emnyama emnyama. Kwelinye icala, kwasetyenziswa ilitye elifanayo elimdaka ekwakhiweni kwebhafu yokuhombisa emnyama eyenziwe ngentsimbi, igcinwe kwivenkilana ene-architrave eqingqiweyo. Izindlu zangasese zihlala zihlala zinamagumbi ahlukeneyo endawo yokuhlambela, ishawa, ikhabethe yokungena kunye nendawo engento yokudala imvakalelo yokunethezeka okupheleleyo.
Ukufakwa kweelimestone ezigubungelweyo kunye nophahla lwelitye lekalika zisebenza njengendawo yangasemva egqibeleleyo kwizibane zodonga ezimnyama zentsimbi kunye ne-chandelier ejingayo ekhanyisa le ndlu yokuhlambela. Ubhedu olunamafutha lusetyenziselwa isinki, iitephu, intloko yeshawa kunye netawuli yokuhamba, ehambelana kakuhle nekhabhathi yemarble ye beige kunye neekhabhathi zamaplanga ezililize. Ibhafu eyakhelwe-ngaphakathi ijongene nefestile emnyama emenyezelwe ngefestile ejongene nesikhumba esimdaka seOttoman.
Le ndlu yokuhlambela yendlu yokuya kwigumbi lokuhlambela isiya kwisitayile esiliXesha lale mihla, ngokuqala ngokukhanya kwesibhakabhaka embindini webala eliluhlaza. Ukukhanya okungwevu okufanayo kusetyenziselwa iindonga, xa kuthelekiswa neebhodi ezimhlophe kunye neefestile ezinqamlezileyo. Ezinye izinto ezimhlophe ezimhlophe zibandakanya isitayile esimi simahla seT Contemporary style, ibhatyi emhlophe emhlophe yesikhumba iOttoman kunye neminye imihombiso emhlophe. Kwelinye icala, idrowa eyakhiwe kunye neshelufu zibonelelwa ngezinto zokuhlamba, iingubo kunye nendawo yokuhlala ebhentshini.
Le ndlu yokuhlambela inkulu ilula kodwa iza nezinto ezininzi ze-bespoke ngobhedu, njengeseti encinci yeetafile. Ephakathi kwebhafu yokuntywila enembonakalo yangaphandle, iishelfu ezimhlophe zijikeleze i-alcove encinci, kwaye umgangatho ubeka iithayile ze-Arabesque mosaic. Emva kwendawo yebhubhu, into yakhe kunye neento zakhe ezingento zibonelelwa ngeetafile zokubala ezingaphantsi eziluhlaza, imiphezulu yeetafile zemabhile zeCalcatta, kunye neendonga ezimdaka ezenziwe ngepeyinti ezifikelela eludongeni.
Amanyathelo amakhulu eethayile emarmore akhokelela kwibhafu yokuhlambela emhlophe eneempompo zobhedu olunamafutha. Isitshixo esimnyama sesinyithi sixhonywe ngaphezulu kwebhafu, sifakwe kwisilingi esisongiweyo esenziwe ngomphetho omdaka we-stucco. Ngaphaya kwebhafu, udonga lwe-mosaic kunye nezityalo ezinamanzi zahlula iingcango ezikhokelela kwishower nakwindlu yangasese. Ngapha nangapha kwebhafu yokuhlambela, itafile yetyuwa kunye nepepile zilungelelaniswe eludongeni kunye nabadwebi abangaphantsi kwamanani amhlophe.
Imiphezulu yeetafile zamatye anemigca enika itiger inika le ndlu yokuhlambela inkulu iswiti yokuhombisa efanelekileyo ehamba kakuhle kunye neekristale zekristale ezijinga phezu kwebhafu yokuphakamisa kunye ne-vanity counter, zombini ezinemigca emhlophe eyenziwe ngamaplanga. Iindonga ezimdaka ngebala ezimnyama sisiseko esihle kwiifestile ezimhlophe kunye neekona, kunye nezitrato eziphakanyisiweyo phakathi kwezibuko ezide ezingenanto.
Igumbi lokuhlambela elinobunkunkqele lisiya kukhangela ngakumbi iTuscan kunye neendonga zalo ezi-orenji eziqaqambileyo, iifestile ezinzima ezimthubi kunye neentsimbi ezimnyama kunye neekristale. Ibhafu emhlophe ibonakalisa isiseko sephaneli somthi esimnyama, itafile yamatye eorenji kunye nendawo yokubasa eyakhelweyo emva kwayo. Indawo yokubasa umlilo ikwanemithi efanayo emnyama ngombala wayo, ehonjiswe ngamakhandlela kunye nesityalo. Iifestile eziphakamileyo zibeka indawo yomlilo kwaye zibonelela ngokukhanya kwigumbi lokuhlambela elinobunewunewu.
Iithayile zamatye ashushu ezimdaka ezigubungela yonke le ndawo yokuhlambela yobunewunewu zibonelela ngemvelaphi engathathi hlangothi kwindawo yokuhlambela yangasese ye-travertine yompompo wamanzi ogqityiweyo. Ibhafu ibiyilwe ngumfanekiso wefestile enkulu ngaphambili, kwaye ecaleni kwayo, indawo ebanzi yokuhlambela ineshawa esineemvula ezimbini efakwe phezulu eluphahleni.
Uhlobo lwendabuko lweplanga lokubhabha kwisiseko sebhafu kunye nokutsala okungekho ngqi kuhamba kakuhle kwiimpompo zegolide nakwiphatho yeedrowa. Ukongeza, ikhandlela yekristale ijinga phezu kwebhafu, isithuba siphindaphindwe ngenxa yomgangatho ukuya esipilini esipilini ngapha nangapha kwebhafu. Imigangatho kunye neendonga zikwitayile elula yamatye e-beige, kwaye kwelinye icala, ezinye iishelfu zakhiwe eludongeni.
Imiqadi yeplanga ebonakalisiweyo eluphahleni oluphezulu kunye namatye agqityiweyo ngamatye anika le ndawo yokuhlambela ye-luxe indlela ethe kratya. Ifestile yesitayile seediliya kwelinye icala kunye neesibane zodonga lwesibane eziwela kulo mxholo. ICarrara marble, esetyenziselwa iindawo zokuhlambela ezininzi, isetyenziselwa iindonga kwindawo yokuhlambela, ebonisa ishawa yomnxeba kunye nemvula. Imarble entle ikwasetyenziselwa imiphezulu yeetafile ebonisa isiseko se-oval esinks kunye neempompo ezibekwe kudonga lwesibuko.
Iithayile zemarble ezinamacala amathandathu ziyinto eyahlukileyo kule ndlu yokuhlambela yendlu kwaye ihamba kakuhle ngeCalacatta marble countertop yento engento ebonisa isinki esimhlophe esimhlophe esinezipili eziphakamileyo kwaye zahlulwe ziintsika zodonga lobhedu. Iikhabhathi ezingaphantsi komhlaba zingumthi omhlophe ofulelwe ngamaplanga ofana nebhafu emhlophe kunye nesikwere esimhlophe sesikhumba i-Ottoman. Kwelinye icala, iglasi enkulu ebiyelweyo yahlulahlula indawo yeshawari ebonisa udonga lwamatye amnyama kunye neeshawari zomnxeba kunye neentloko ezimbini ezinkulu zeshawari yemvula.
Isitayile sendabuko esenziwe ngeemabhile esinqumleze ilize ngemilenze yentsimbi kunye netawuli yokubeka itawuli xa ithelekiswa nezinto zangoku zale ndlu yokuhlambela. Iimpompo zomgama ogqityiweyo chrome zisetyenziselwa into engento ephindiweyo enezibuko ezijikelezayo ngaphezulu kwesinye, ezityikitywe yishelufa emarmore emhlophe. Uphahla lwendlu lwendlu lulandelwa luthambeka oluphezulu apho ikhandlela lebhola lijinga phezu kwebhafu ejikelezayo ejikelezayo phambi kwefestile emhlophe emhlophe. Kwelinye icala, ukwakhiwa kwamatye aqingqiweyo kusebenza njengendawo yokucima umlilo, ehonjiswe ngemizobo yeentyatyambo.
Le ndlu yokuhlambela yobunewunewu ineseti yeglasi emhlophe eneengcango ezimhlophe ezivulekileyo ukuya kwibhafu ebabazekayo enombala omhlophe ophelileyo kwisiseko sayo kunye neempompo zesilivere ngaphezulu kwelitye elimhlophe. Iithayile zomgangatho wemarble ezisisiqingatha zibaleka ngokungqamene kuwo wonke umgangatho wokuhlambela kwaye zikwasetyenziselwa indawo yokuhlambela eshaweni enemvula yeshawari. I-marble ihamba kakuhle kunye nodonga olukhanyayo lwe-beige, ikhabethe elimhlophe, isiliva kunye ne-chandelier ephakathi.
Iibhasikithi ezingwevu nezimdaka ezenziwe ngomdongwe zethayile ezisetyenziselwa indawo enamacala amathandathu eebhafu zihamba kakuhle ngamampunge amakhulu enkuni kunye nokuxhonywa kwelinye icala, kugqitywe ngee-countertops zelitye elimdaka kunye nesitayile sediliya. Ibhentshi eyenziwe ngomthi ibekwe phantsi kwento engenamsebenzi, kwaye izibuko ziyilelwe ukuhambelana ne-arch kunye ne-curvature yokwakhiwa okwenziweyo. Iithayile zamatye endalo zibekwa kumgangatho wegumbi lokuhlambela kwaye zihamba kakuhle nge-kitschy zebra-patterned Ottoman ezinyaweni zebhafu.
Le ndlela yokuhlambela yaseMeditera inezitayile zemibala kunye namanyathelo amatye amdaka akhokelela kwibhabhu emhlophe eneempompo zobhedu ngeoyile. Isinyithi esimnyama esintsonkothileyo kunye neglasi enekhephu ijinga ijinga ngaphezulu kwebhafu, kwaye ibhafu ikwangqongwe yifestile evaliweyo eyenziwe ngomthi kunye nendawo yomlilo evalelwe eludongeni lwe stucco. Indawo eseleyo yokuhlambela ineebhodi ezimdaka ngombala kunye nee-cornices, ezazisetyenziselwa iikhabhathi zepaneli eziphakanyisiweyo kunye needrawer zamampunge.
zithetha ntoni iimpahla zomtshato ezisesikweni
Iintsika ezimbini zelitye eliqingqiweyo zibambe isilingi emarmore emtyabileyo phezu kwebhafu yale ndawo yokuhlambela yendlu. Amanyathelo eGranite akhokelela kwindlela ebhafini emhlophe emhlophe egqityiweyo ngefestile kunye neendlela zesitayile zodidi. Kwelinye icala, ikhawuntari enkulu yamampunge ihleli ezantsi kwendlela, apho isipili senziwe ukuba sigubungele lonke udonga kwaye sikhanyiswe zizibane ezixhonywe eludongeni ngokwesiko. Inkuni etyebileyo emdaka isetyenziselwa iikhabhathi zephaneli kunye nedrowa, kwaye ikwasetyenziselwa ucango kunye nekhawuntari encinci yamampunge ecaleni kwayo.
Oku kubandakanya ukukhanya kweendonga ze-beige kunye neebhodi ezimhlophe, ii-cornices kunye neefestile zeefestile, le ndawo yokuhlambela inkulu kodwa igcina isitayile esingapheliyo. Ukucuthwa okukhulu kwemhlophe emhlophe ye-Calacatta kusetyenziselwa umgangatho, kunye nobunzima obunzima obunzima obusetyenziselwa indawo yokuhlambela, egcwele ibhentshi yokuhlambela kunye neshawa yemvula. Ngapha koku, ibhafu emhlophe emile yebhontshisi ihleli phantsi ngeempompo zesilivere. Iwindow kunye nekhabhathi yokugcina iglasi ephezulu zihlala ecaleni kweyona ndawo iphambili yamampunge, kunye nesipili esikhulu esimhlophe esenziwe ngombala omdaka kunye nesinxibo somthi esimhlophe esimnyama kunye neekhabhathi.
Ibhafu enkulu ye-whirlpool yindawo esembindini wale ndlela yokuhlambela yaseLouis XIV, kunye nomzimba wayo ubekwe kwilitye elimbala omdaka-golide elakhiwe kumgangatho wethayile. Iindonga zenziwe ngepeyinti ebunjiweyo ye-beige ehambelana kakuhle nezinto eziqaqambileyo zegolide kwii-cornices, ifenitshala kunye nokukhanya. Uhlobo lwendlu yokuhlambela lugqityiwe bubude obude bomgangatho kunye nevelvet emhlophe ejijise ama-Ottomans ajikeleze igumbi.
Iithayile zelitye elinzima zilungelelanisa udonga lwale ndawo yokuhlambela yobunewunewu, ngakumbi indawo enesetyhula eqhekeke kuphela ziifestile ezenziwe ngomthi kunye nezibuko ezingenachaphaza. Apha ngezantsi kwale ndawo inesetyhula, itafile enqamlezileyo yomthi ibambe indawo ezimbini zokuhlambela zohlobo oluphantsi lwesitya kunye neempompo zohlobo lwesilivere. Olu seto lwangoku luphefumlelweyo lweZen lunikwa uluvo ngakumbi ngobunkunkqele ngokusetyenziswa kwethayile yegolide enemibala yodonga olusisigxina ngaphezu kwebhafu yokuhlamba emhlophe.
Indawo enkulu yomlilo yindawo ephambili yale ndawo yokuhlambela ye-luxe yodidi, igqityiwe nge-Neoclassical mantel kunye ne-arch, kunye nebhentshi yelitye legranite. Isetyhula ityali yasePersi ihleli kumgangatho wethayile phantsi kwayo, uphawu olukhulu kwigumbi elimhlophe kunye negolide lodonga. Kwelinye icala, ishawa ebiyelweyo yekona ifakwe ithayile efanayo yelitye kunye neethayile zemosisi ezinemibala emnyama. Ifakelwe ishawa yemvula kunye nebhentshi lokuhlambela. Ikhefu ecaleni kwendawo yokubasa umlilo linomthamo omnyama wamatye amnyama ngaphezulu kweekhabhathi ezimhlophe eziphakanyisiweyo zepaneli.
Yonke le nto yokuhlambela emhlophe ineeprofayili zodidi oluphezulu kunye nepop ye-luxe yanamhlanje enezinto zayo zokuthambisa zegolide. Ityhubhu emhlophe yeceram inezinzipho zeebhere zegolide kwisiseko sayo kunye neseti yompompo wegolide esecaleni, egxininiswe sisipili sedayimane esisikwe ngasemva kwayo, ejolise kwiifestile ezimbini ezinkulu ezinamaqonga. Ngapha nangapha koku, iindonga zibonisa ithayile emhlophe ejijiweyo enamanqaku egolide, kwaye ixhasa isipili segolide kunye nodonga lwegolide olugudle kakuhle ngaphezulu kwekhawuntari emhlophe yokuhlambela ebekwe ngeetafile ezingaphantsi. Iimpompo zelondolo kunye nezibambo zekhabinethi zikwigolide, kunye nelaphu letawula kwelinye icala. Iindawo zokuhlambela izindlu zokuhlala zihlala zihamba ngomxholo odibeneyo odala imvakalelo ethile kunye nokuma kakuhle xa umntu engena kwisithuba.
I-Ottoman emhlophe emhlophe yesikhumba ihleli kumgangatho wokhuni olaminethiweyo okhokelela kule ndawo yokuhlambela ye-luxe master. Umtya omncinci omncinci emgangathweni wahlula i-walk-in closet flooring emgangathweni ukusuka kwithayile yelitye emdaka esetyenziselwa indawo yokuhlambela eqhubeka ukuya kufikelela kwiglasi yokuhlamba yeglasi. Iindonga ze-beige kwigumbi lokuhlambela zibonisa ipaneli emhlophe efihliweyo emhlophe eqengqelekayo kwisiqingatha sayo esisezantsi, ngakumbi kwiindonga zangasemva zeefestile ezimbini ezibambe ibhafu emhlophe emile ngetephu enodonga. Kwelinye ikona, iishelfu ezide ezimileyo zijolise kwinto engento yeplanga emhlophe ebekwe ngeekhabhathi zeglasi ezibandayo kunye neesinki ezinamacala ngaphezulu.
Le ndlu yokuhlambela yaseTuscan iqala nge-arched alcove ebhafini emhlophe, inyuswe yethayile yangaphantsi yelitye eyakhiwe ngomthi ofudumeleyo. Le alcove, kwilitye lexabiso lendalo, ihonjiswe ngononophelo ngezinto zaseTuscan ezinje ngezityalo ezibhotyiweyo, ababambi bekhandlela, amalengalenga amhlophe amhlophe kunye nesitulo se-chintz. Indawo ebiyelweyo yokuhlambela ikwafaka i-luxus efanayo yaseTuscan kunye neethayile ezenziwe eludongeni, iimpompo zobhedu kunye nethayile yemosaon esetyenziswa phantsi. Kuyo yonke le ndawo sisitafile somthi esikhazimlisiweyo esikhanyiswe ngeglasi enekhephu kunye nezikhuselo zodonga ngeoyile.
Amakhethini amhlophe amhlophe atsalwe ngasemva nangegolide ebotshwe ngasemva evula le ndawo yokuhlambela iphefumlelweyo yeZen ephethe imicu yomthi efudumeleyo. Ibhafu emileyo emile okwelitye ihleli embindini wegumbi lokuhlambela, elikhanyiswe ngesibane sephepha lesambatho sangoku. Ikwaqulethe itafile encinci yekofu eyenziwe ngomthi kunye nethawuli. Kwelinye icala layo, iphepha elicacileyo leglasi lahlula indawo ebiyelweyo yeshawari, ngelixa itafile yeplanga emnyama ithwala iziseko ezifanayo eziphefumlelweyo zeZen. Umva ongasemva kwigumbi lokuhlambela unefestile yemifanekiso ebanzi ejonge ngaphandle, ikwahlulwe ngalamakhethini amhlophe amhlophe kunye ne-tasseled tie-backs emnyama.
Iibhafu zokuhlambela - Imiboniso yokuhlambela - Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela - Amagumbi okuhlambela aneeChandeliers - Iishawari zodidi
Umama obalaseleyo weengubo zomtshakazi
Ikrisimesi izimvo zesibini esitshatileyo
indlela yokwenza isaphetha esenziwe ngeribhoni
Iiphakheji zasemva komtshato zinexabiso eliphantsi zonke zibandakanya
Ukulunga kunye nokubi komtshato vs ukuhlala kunye
yintoni ukufumana umyeni ngosuku lokuzalwa